QM oo Bayaan kasoo saartay Abaarta kajirta meelo kamid ah Sooomaaliya | dayniiile.com
Home WARKII QM oo Bayaan kasoo saartay Abaarta kajirta meelo kamid ah Sooomaaliya
QM oo Bayaan kasoo saartay Abaarta kajirta meelo kamid ah Sooomaaliya
Warbixin uu soo saaray isku duwaha arrimaha bini’aadantinimada Qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Adam Abdelmoula ayuu ku baaqay in si deg deg ah loo xoojiyo sidii gurmad loo garsiin lahaa dadka ay saameeysay abaarta kajira meelo kamid ah dalka Soomaaliya.
Adam Abdelmoula oo kamid ahaa Mas’uuliyiin booqday xerooyin barakac oo kuyaalla Gobolka Gedo ayaa sheegay in uu indhihiisa kusoo arkay dhibaatada ka dhalatay abaarta, isla markaana loo baahan yahay in dadkaas loo gurmado.
“Xaaladda bini’aadantinimo ee Soomaaliya si degdeg ah ayay uga sii xumaanaysaa. Durba 1.5 milyan oo carruur ah oo da’doodu ka yar tahay shan sano ayaa la il daran nafaqo-xumo, waxaana fileynaa in 356,000 oo carruurtan ka mid ah aysan sii noolaan ilaa dhammaadka bisha Sebtembar ee sanadkan,” ayuu Abdelmoula ku yiri bayaan uu soo saaray.
Sidoo kale Adam Abdelmoula ayaa ka digay in nafaqo-xumada ba’an ay sii kordheyso haddii aan qorshaha wax-ka-qabashada abaaraha si weyn kor loogu qaadin, maadaama dad badan ay saameysay abaarta kajirta dalka Soomaaliya.
Meelo badan oo kamid ah koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa xilligan kajira abaar aad u adarn, iyada oo dowladda Soomaaliya iyo Hay’adaha samafalka ay ka gaabiyeen wax u qabashada dadka ay saameeysay abaarta.
Previous articleWaan waan laga dhex-bilaabayo Xukuumadda Somaliland iyo mucaaradka
Next articleWafdiga Madaxweyne Xasan Sheekh oo la la’yahay Kadib Marki ay ka dageen Imaaradka Carabta
Cristiano Ronaldo says one of his newborn twins has died
Ergayga gaarka ah ee Gurmadka Abaaraha oo qaabilay Safiirka Shiinaha ee...
Saudi King Salman and Crown Prince Mohammed bin Salman congratulate French...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 8, 2022 0